Foto-pampianarana Info. About. What's This?
Ny andian-teny latina hoe Sola fide, izay midika ara-bakiteny hoe "aminny alalanny finoana irery", dia ainga fototra protestanta milaza fa ny asa tsara ataonny olona dia tsy mandray anjara aminny fanavotana azy. Ny teolojiana miteny malagasy dia mandika io andian-teny io hoe Finoana irery ihany ". Iray aminireo andian-teny latina dimy manomboka amininny hoe Sola ny Sola fide. Izany finoana izany dia ny finoana ny fahafatesani Jesosy Kristy mitondra fanavotana teo aminny hazofijaliana noho ny fahotanny olombelona izay miaiky azy ho mpamonjy. Mamerina ny fihavananny olombelona aminAndriamani ...
Ny kalvinisma dia foto-pampianarana teôlôjika prôtestanta sy fomba fijery ny fiainana kristiana izay mifototra amin ny fiandrianan Andriamanitra amin ny zavatra rehetra. Na dia maro ireo teôlôjiana nampandroso ny kalvinisma toa an i Martin Bucer, i Wolfgang Musculus, i Heinrich Bullinger, i Pierre Martyr Vermigli, i Ulrich Zwingli ary i Théodore de Bèze, dia ny anaran ilay mpanitsy fiangonana frantsay Jean Calvin no nentin io firehana ara-teôlôjia prôtestanta iray io noho ny akon ny fampianarany sy ny ady hevitra nataony tamin ny taonjato faha-16 momba ny fanekem-pinoana sy ny anjara toera ...
I Martin Bucer na Martin Butzer dia teôlojiana sy refôrmatora prôtestanta alzasiana izay nipoiranny kônfirmasiona prôtestanta. Teraka taminny 11 Novambra 1491 tao Sélestat izy ary maty taminny 28 Febroary 1551 tao Cambridge. Nisy fiantraikany taminny foto-pampianarana loterana sy kalvinista ary anglikana ny fiheverany.
Ny fanambaràna miandalana dia foto-pampianarana lehibe ao amin ny finoana bahay, izay milaza fa ny fahamarinana ara-pivavahana dia ambaran Andriamanitra miandalana sy amin ny vanimpotoana tsirairay amin ny alalan ny hafatra mifandimby avy aminy, ary ny fomba fampitana azy araka ny foto-pampianarana samihafa dia mifanentana amin ny fivoarana ara-potoana sy ara-kolontsaina. Noho izany dia eken ny Bahay ny maha avy amin Andriamanitra ny fivavahana maro manerana izao tontolo izao, ary heverin izy ireo fa dingana miavaka tsirairay eo amin ny tantaran ny fivavahana tokana ireo fivavahana toa sam ...
Ny hoe Prima scriptura, izay midika ara-bakiteny hoe "aminny alalanny soratra aloha", dia foto-pampianarana kristiana izay manambara fa ireo soratra kanônika kristiana no loharano voalohany momba ny fanambarànAndriamanitra sy momba ny fenitra tsy maintsy itsarana ireo endrikizany fanambaràna izany, toy ny lovam-pampianarana, ny fanomezana karismatika, ny fahitana mistika, ny fisehoanny anjely, ny hevitry ny manam-pahaizana, sns. Ny Prima scriptura dia matetika ampitahaina aminny Sola scriptura "aminny alalanny Soratra irery", izay adikanny firehana prôtestanta sasany, indrindra ireo fiango ...
Ny neo-ortodoksia na teolojia dialektika dia firehana ara-teolojia ao aminny protestantisma izay nandroso taorianny Ady Lehibe Faharoa. Mampiavaka azy ny fanoherana ny fampianaranny teolojia liberaly taminny taonjato faha-19 sy ny fanamafisana ny fahefanny fampianaranny Reformasiona izay nihalefy hery nanomboka taminny taonjato faha-18, indrindra tao Eoropa Andrefana. Ny teolojianny pastora soisa roa lahy Karl Barth sy i Heinrich Emil Brunner no santionanizany teolojia neo-ortodoksa izany. Tsy azoazonizy ireo anefa ny iantsoana azy hoe "neo-ortodoksa" satria tsipahiny ny foto-pampianarana ...
I Eotikesy dia monka bizantina izay nanohana ny mônôfizisma. Teraka tamin ny taona 378 i Eotikesy ary maty tamin ny taona 454. Araka ity foto-pampianarana atao hoe mônôfizisma ity dia manana afa-tsy natiora tokana i Kristy, dia ny natioran Andriamanitra. Nanohitra mafy ny nestôrianisma i Eotikesy. Ny fampianarany dia nitovitovy amin ny an i Apôlinario any Laôdikea sy ny an i Kirilosy any Aleksandria, izay mitsipaka ny fiheverana an i Kristy ho manana natiora roa miavaka tsara, ka nanoritra mazava ny maha iray tsy mivaky an i Kristy amin ny fikambanan ny natiora roa ho tokana. Atao hoe eoti ...
Ny tsy fetezan-disonny Papa dia foto-pampianarana na tenim-pinoan ny Fiangonana katolika romana izay milaza fa eo am-panatanterahana ny fahefany dia tsy mety ho diso ny Papa raha manao fanambaràna noho ny fananany fahefana apostolika fara-tampony momba ny finoana sy ny fitodran-tena sy noho ny fanampian Andriamanitra izay miaro azy amin ny mety ho fahadisoana. Notoherinny Protestanta izany sady niteraka fisarahan ny Fiangonana katolika tranainy tamin ny Fiangonana katolika romana.
I Fernando Martins de Bulhões dia pretra fransiskana, mpampianatra foto-pampianarana ara-panahy, mpitoriteny fanta-daza ary mpanao fahagagana, izay nasandratra ho olomasina tamin ny taona 1232, roa taona latsaka taorian ny fahafatesany, dia nambara ho mpampianatry ny Fiangonana tamin ny taona 1946. Teraka tamin ny 15 Aogositra 1195 tao Lisboa Pôrtogaly, izy ary maty tamin ny 13 Jona 1231 tao akaikin i Padova Padoue amin ny teny frantsay any Italia. Ao amin ny litorjia dia tsarovana isaky ny 13 Jona ary hajaina amin ny anarana hoe Antonio di Padova amin ny teny italiana na hoe Antoine de Pa ...
Ny onitarisma dia fampianarana ara-pivavahana tsy mino ny Trinite, izay milaza fa fanahy iray dia iray ihany Andriamanitra fa tsy tokana mizara ho persona telo. Ny onitarisma dia manohitra ny trinitarisma izay foto-pampianaranny kristianisma manaraka ny Konsily voalohany tao Nikea taminny taona 325 sy ny Konsily tao Kalkedona taminny taona 451 izay arahinireo fiangonana lehibe toy ny Fiangonana katolika sy Fiangonana ortodoksa ary ny ankamaroanny Fiangonana protestanta. Ny firehana onitariana dia mandà ny maha Andriamanitra ani Jesosy Kristy, izay ataony hoe olona manakaiky kokoa an Andria ...
Ny fiteraham - birijiny na fitorontoronam - birijiny dia foto-pampianarana ao amin ny Baiboly sy ny Korany izay milaza fa naterak i Maria izay nitoetra tamin ny maha virjiny azy i Jesosy. Samy mino ny fiteraham-birijiny na ny Kristiana na ny Miozolmana na dia tsy mitovy ny dikan izany ao amin ireo fivavahana roa ireo. Ny Evanjelin i Matio no milaza izany. Midika izany fa tsy nanao firaisana ara-nofo i Maria taloha sy nandritra ny nampitoe-jaza azy. Ny Ortodoksa sy ny Katolika dia nanitatra an izany fampianarana izany ka milaza fa nitoetra ho virjiny i Maria na dia taorian ny niterahany an ...
Ny andian-teny latina hoe Solus Christus, izay midika ara-bakiteny hoe "Kristy irery", dia manambara fa ny famonjena ny fanahinny olombelona dia tsy maitsy mandalo amini Kristy mivantana sy aminny alalany irery ihany. Adika aminny teny malagasy hoe Kristy irery ihany na Jesosy irery ihany io andian-teny io. Izany dia midika fa i Jesosy Kristy no hany mpanelanelana fa tsy ny mpitondra fivavahana. Ity ainga fototra ity, izay mampiavaka manokana ny protestantisma dia isanireo andian-teny filamatra dimy manomboka aminny teny hoe Sola izay andrinny soteriolojia protestanta. Azo soratana hoe Sol ...
Ny Filioque dia teny latina nampidirina tao aminny Fanekem-pinoana nikeana tao aminny konsily fahatelo natao tao Toledo taminny taona 589, izay niteraka tsy fitovian-kevitra teo aminny Fiangonana kristiana ka niteraka ny fisarahanny Fiangonana tandrefana sy ny Fiangonana tatsinanana. Ny teny hoe Filioque, izay vakina hoe, dia midika hoe "sy avy amin’ny Zanaka". Izao ilay andalana nitsofohanio teny io: Credo in Spiritum Sanctum qui ex patre filioque procedit "Mino ny Fanahy Masina izay mivoaka avy aminny Ray sy avy aminny Zanaka aho". Izany fanovonana izany dia manambara ny foto-pampianaran ...
Ny Fanekem - pinoani Kalkedôna na Fiekem - pinoani Kalsedoana dia fiekem-pinoana tapaka tamin ny Kônsilin i Kalkedôna tamin ny taona 451. Mamaritra ny fiombonanny natiora roan i Kristy sady nanamafy koa ny maha Renin Andriamanitra an i Maria io fanekem-pinoana io.
Ny diofizisma na diofizitisma dia fampianarana kristolojika noraisinny konsily ekiomenika fahefatra, dia ny Konsily tao Kalkedona taminny taona 451 izay manambara ny maha tokana ani Kristy manana natiora roa tsy mifangaro tsy miova ary tsy mizara no tsy misaraka.
natiora na fomba Niorina manodidina ny fanekem - pinoana nikeana ny foto - pampianarana kristiana nanjaka tamin izay, izay nanekena ny fitoviam - pomban ny
dôgmatika dia azo faritana ho fanehoana amin ny fomba siantifika ny foto - pampianarana manontolo momba an Andriamanitra sy ny asan Andriamanitra miseho
Tridentio. Ny fiovam - pisia - maha - izy, ao amin ny teolojia katolika dia foto - pampianarana ilazana fa amin ny fanamasinana ny eokaristia dia miova ho tena nofo
avy amin ny Zanaka aho Izany fanovonana izany dia manambara ny foto - pampianarana izay manao ny Fanahy Masina ho mivoaka avy amin ny Ray sy ny Zanaka
Niitatra ivelan ny resaka adin ny tafika izany ka nahazo koa ny ny foto - pampianarana sy ny fivavahana izay tena ampiasana io teny io. Ny teny hoe sinkretisma
koa Ny foto - pampianarana sy ny tenim - pinoana ao amin ireo fivavahana mônôteista momba ny fisian ny fiainan - tsy hita dia nateraky ny foto - kevitra mitaky
תורה שבעל פה Torah SheBe al Pe, dia teny anondroana ny hevitry ny foto - pampianarana sy ny tahirin - dahatsoratra momba izany izay ampitaina am - bava ao amin ny
fiovam - pinoana voalohany. Fanambaràna ny foto - javatra ao amin ny foto - pampianarana kristiana izany: ny foto - pinoana, ny sakramenta, ny fitondrantena
Ny môrmônisma dia ny foto - pampianaran ny Fiangonan i Jesoa Kristy ho an ny Olomasin ny Andro Farany. Izany foto - pampianarana izany dia ahitana ny
heveriny fa tsara kokoa noho ny fahalalana ny antsipiriany amin ny foto - pampianarana lazaina hoe marina ortodoksia momba ny fivavahana. Ny Soratra Masina
dia foto - pampianaram - pivavahana izay milaza ny fiaraha - misin ny foto - javatra roa maharitra nipoiran ny tsara sy ny ratsy. Mampifanohitra foto - javatra
ôrdônansy masin ny Filazantsara ho azy ireo sy ho an ny maty. Araka ny foto - pampianarana môrmôna dia mandray ny famangian ny Tompo ny tempoly. Amin ny Olomasinan